Dowlada Turkiga oo Shaacisay tirada lacagta ay ku maalgalisay dalka Soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Turkiga ayaa soo bandhigtay tirada lacagta ay ku maalgalisay dalka Soomaalida sanadihii lasoo dhaafay , waxa ayna Dowladu sheegtay in ay Soomaaliya ka fulisay mashaariic kala duwan .
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Lütfi Elvan, oo shalay ka hadlay Shir gaar ah oo looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo ka dhacay Magaalada Istanbuul , ayaa sheegay in Dowladiisa ay lacag badan ku maalgalisay Soomaaliya.
Lütfi Elvan, ayaa tilmaamay in maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya uu gaarayo illaa 100 milyan oo dollar, ilaa dhamaadka sanadkii hore, waxa uuna intaa raaciyay in Soomaaliya uu yahay dal ku haboon xiligan in la maalgashado.
Waxa uu ku dhiiro galiyay Ra’isul Wasaare kuxigeenka Dalka Turkiga dadka hantida heesta in ay maalgashadana Dalka Soomaaliya uu tilmaamay in uu yahay dal ku haboon maalgashiga oo leh xeebta ugu dheer Afrika sidoo kale leh qeyraad kale oo dabiici ah.
Dowlada Turkiga ayaa maalgashi ka sameesay dalka Soomaaliya , waxa ay sidoo kale dalka ka fulisay mashaariic kala duwan oo ka qeyb qaadanaya horumarka Soomaaliya sida wadooyin la dhisay , iyo xarumo badan oo la dayactiray.
Ragga iyo Dumarka soomaalida yaa qaladka leh -Gabadhan daawo